प्रधानमन्त्री मोदीले १५ नयाँ मन्त्री थप्दै, ति काे काे हुन ? - Everest Dainik - News from Nepal
प्रधानमन्त्री मोदीले १५ नयाँ मन्त्री थप्दै, ति काे काे हुन ?
काठमाडौं, भदौ १७ । प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदीले भाेली अार्इतवार मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्दैछन । भाेली सवा दस बजे १५ नयाँ मन्त्रीकाे शपथ ग्रहण कार्यक्रम तय भएकाे छ ।
भाजपा महासचिव भूपेंद्र यादव, पार्टी उपाध्यक्ष विनय सहस्रबुद्धे, प्रहलाद पटेल, सुरेश अंगडी, सत्यपाल सिंह और प्रहलाद जोशीलार्इ मन्त्री बनाउन लागिएकाे चर्चा छ ।
याे पनि पढ्नुस भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउने
यसअघि हिजाे भारतका पाँचजना मन्त्रीले राजिनामा दिएका थिए । राजिनामा दिनेमा जलस्रोत मन्त्री उमा भारती, सीप विकास मन्त्री राजिव प्रताप रुडी, कृषिमन्त्री राधा मोहन सिंह, जलस्रोत राज्यमन्त्री सञ्जिव बल्यान र साना उद्यम सम्बन्धी मन्त्री गिरीराज सिंह छन् ।